Xasan Sheekh: ”Doorashada Qaranka ma noqon doonto tii ka dhacday Baydhabo oo kale”! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xasan Sheekh: ”Doorashada Qaranka ma noqon doonto tii ka dhacday Baydhabo oo...
Xasan Sheekh: ”Doorashada Qaranka ma noqon doonto tii ka dhacday Baydhabo oo kale”!
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud /Sawir hore/ Keydka Halqaran.com
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Kismaayo ka sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya aan loogu dulqaadan doonin in doorashada Qaranka ay ka dhigto doorashadii Baydhabo oo kale.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in doorashada Qaranka ay ku dhici doonto sidii looga bartay, islamarkaana haddii dowladda dhexe ay isku daydo in ay isku koobto dhibaato badan ay ka dhalan doonto.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh ayaa xusay, in dowladda aan laga aqbali doonin in doorashadda Qaranka lagu dhibaateeyo Shacabka sida dhacday doorashada Magaalada Baydhabo.
Si kastaba, siyaasiyiintii Sabtidii maanta ka qeyb galay Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa intooda badan eedeyn kulul u jeediyay dowladda iminka jirta ee uu madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
doorashadii ka dhacday Baydhabo oo kale